Ny fahavaratra dia fotoana mahafinaritra sy mampientanentana amin'ny taona, raha tsy mankafy masoandro fotsiny isika, fa manana ihany koa ny fahafahana mampiseho ny endrika tsara tarehy, ary koa ny hampisehoana ny lamaody am-pandriana mandritra ny fahavaratra.
Inona no tokony ho akanjo maoderina mandritra ny fahavaratra?
Tsy misy olona mandà hanafina tanteraka ny jeans sy ny pataloha, fa ny zavatra hafa dia manan-danja amin'ny vanim-potoana mafana:
Ny akanjo lava sy lava sy sarafana dia manome fahafahana tsara hanantitrantitra ny maha-vehivavy azy, ny firaisana ara-nofo;
Ireo t-shirts, ireo mpihetsiketsika, ireo tara-pahazavana maivana izay manokatra ny vavony - ireo tsikirikirioka vehivavy dia tsy hivoatra;
Ny akanjo lava na ny akanjo-akanjo-akanjo dia tena kanto sy mijery ny endrika karazana rehetra;
Ny zavatra mitafy dia tsy mivoaka amin'ny lamaody na amin'ny fahavaratra, fa ny volony ihany no lasa marefo, ary ny fingotra - ny delika.
Fanoroana sy fanorenana fitafiana fahavaratra ho an'ny vehivavy
Amin'ity vanim-potoana ity, ny loko pastel dia tiana kokoa - beige, milky, pistachio, peach, tazo. Mahavita mamirapiratra miaraka amin'ny akanjo sy kiraro matsiro izay tsara tarehy miaraka amin'ny akanjo maivana. Misy ihany koa ny fanavaozana ao amin'ny decor:
Ireo mpahaikanto dia mazoto mampiasa fomba amam-panao amin'ny fikarakarana, fa tokony hotsaroana fa tokony hambolena zavatra iray fotsiny izy ao amin'ilay kitapo;
Ilaina ny mandinika ireo lamba, izay voaravaka amin'ny driaka na sary hosodoko;
amin'ny lamaody ny sela sy ny sodina;
Na amin'ny fahavaratra aza dia afaka mampiasa volon'ondry amin'ny akanjo fitafy ianao.
Ny akanjo fanaon'ny vehivavy mody mody dia maivana, zavamanitra volo vita amin'ny sehatra, chiffon, organza, kodiarana. Ireo lamba ireo dia tena tsara ho an'ny vehivavy mareva-doko sy ny zazavavy kely. Ny akanjon'ny vehivavy an-tsokosoko amin'ny habeny lehibe dia tiana ny hisafidy fahalalahana maimaim-poana, fa manalavira ny gorodona sy ny ruches.
Tadidio fa ny akanjo ety ankilan'izay ankizivavy dia tsy akanjo vaovao sy kiraro fotsiny, fa koa tsikitsiky mahafinaritra, haingon-tsakafo, voninkazo hafakely na menalaza, ary mazava ho azy.
Lamina fitafiana ho an'ny vehivavy matavy
Ahoana ny fisafidianana ny lobaka ara-pahasalamana?
Blue jacket - 37 sarin'ny modely modely amin'ity vanim-potoana ity
Dress Midi - modely modely sy modely amin'ny fotoana rehetra
Organizer ho an'ny lamba rongony
Ny fibobohana atrialia - Ny antony sy ny soritraretina
Famantarana ny tsy fahampian'ny olona
Ahoana ny fanesorana ny aretin-kibo ao amin'ny tenda?
Torkia - Efesosy
Zanakalahy na zanakavavy? Candice Swainpole naneho ny firaisana amin'ny zanany faharoa
Recipe lobio ao Géorgie avy amin'ny voankazo mena
Mofo kesika misy paoma
Morgan Freeman tamin'ny fahatanorany
Ahoana ny fomba famindrana lisy any amin'ny toeran-kafa?
Mofomamy miaraka amin'ny trondro sy mascope
Kitapo misy metanina
Mofomamy ao amin'ny multiwark